सङ्घीय संसद विघटनको झट्का जंगीअड्डामा, के सेना परिचालन हुदै सङ्कटकाल लाग्ने हो ! – Halkhabar kura
५ पुष २०७७, आईतवार १६:०३
सङ्घीय संसद विघटनको झट्का जंगीअड्डामा, के सेना परिचालन हुदै सङ्कटकाल लाग्ने हो !
नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा आइतबार प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स (पीएसओज्) को बैठक चलिरहेको थियो । जंगीअड्डाका सबै विभागीय प्रमुख र अन्य जर्नेलहरू सहभागी बैठकका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको खबर आयो ।
लगत्तै जर्नेलहरूबीच ओलीको कदमबारे छलफल भएको स्रोत बताउँछ । विशेषतः प्रधानमन्त्रीको कदमपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नसक्ने असरका विषयमा छलफल भएको स्रोतले बतायो । ‘यो विषय बैठकको एजेन्डा थिएन तर समसामयिक घटनाक्रममा छलफल हुनु सामान्य र नियमित कुरा हो’, जंगीअड्डा स्रोतले भन्यो, ‘शान्ति सुरक्षामा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा कुराकानी भएको छ ।’
अहिले शान्ति सुरक्षा कायम गराउनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल खटिँदै आएको छ । तर जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यकता देखे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा सेनालाई पनि खटाइने गरिएको छ। त्यस्तो अवस्था आउनसक्ने भएकाले सबै युनिटलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन दिइएको छ।
यसबीच नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले उच्च सतर्कता अपनाउन मातहतका इकाईहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमपछि देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन र आन्दोलन बढ्ने विश्लेषणसहित ‘हाई अलर्ट’मा बस्न निर्देशन दिइएको हो ।
नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर पछिल्लो कदमले उपन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई सामना गर्नका लागि तयार रहन भनेका छौं ।’
Previous २० लाख राशीको डान्सिङ वीथ द स्टार्सको उपाधी सुमी र विजुलाई (आजको पुरा भिडियोसहित)
Next ओलीले प्रचण्डलाई मिलेर चुनावमा जाऔं र जितेर आऔं’ भनेपछि